musha Asia Mabhokisi Oleksandr Usyk Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Oleksandr Usyk Biography inoratidza chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai (Yekaterina Usyk), Vana, uye Vanin'ina. Kunyanya zvakadaro, maBoxers 'Mararamiro, Net yakakosha Mubhadharo, uye Hupenyu Hwega.
Zvichitaurwa zviri nyore, iro basa pano ndere kuburitsa zvakadzama muongororo weuyu wekuUkraine nyanzvi wetsiva. Yedu nyaya inotangira kubva paakazvarwa kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Kuti uwedzere hupenyu hwako hwehupenyu, tarisa pane iyo gallery yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwake kubva pakutanga. Pazasi pane nhanho-nhanho mufananidzo weOleksandr Usyk's Biography.
Oleksandr Usyk Biography - Hupenyu hwepakutanga uye Kumuka.
Ehe, isu tese tinomuziva nekuda kwesimba rake retsoka uye kusimba kupfeka pasi vapikisi. Zvakare, ndiye wekutanga cruiserweight munhoroondo yekubata makwikwi mana makuru epasi rese - iyo WBA (Super), WBC, IBF, uye WBO.
Zvisinei nezvaakawana, pane mikana yese yekuti hauna kuverenga vhezheni yakapfupika yeOleksandr Usyk's Biography. Ichave inonakidza kukwira sezvo isu tichikuunzira iwe inonakidza ngano yeBoxer. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Oleksandr Usyk Yehucheche Nyaya:
YeBiography Starters, ane zita remadunhurirwa rekuti Katsi kana Olek. Oleksandr Oleksandrovych Usyk akazvarwa pazuva re17th raNdira 1987 kuna Amai vake naBaba. Nyanzvi Boxer akaberekerwa muSimferopol, Crimean Oblast, Ukraine SSR.
Tarira, iye Boxer achiri mudiki achiri mudiki. Aigona here kuve mumwe wevabereki vaOleksandr Usyk - amai vake vaanoda? Anotaridzika semukadzi akamupa hunyoro hwekuchengetwa kwaamai.
Angave mumwe wevabereki vaOleksandr Usyk - Amai Vake?
Mushure mekuzvarwa kwake, muUkraine Boxer akasundirwa muhupenyu uko kwake kungoburitswa yaive Sports. Nekudaro, iye akapinda mumhando dzakasiyana dzemitambo yeAtletic.
Semwana, vabereki vaOleksandr Usyk vakamubvumira kutora chikamu mumitambo yakawanda, iyo; mutsimba, kurwa nemaoko, uye karate.
Zvakare kucherechedza, mudiki ainakidzwa nekutamba nhabvu kubva paakafamba. Akatora chikamu mubatanidzwa nhabvu. Little Olek akadzidziswa kuSC Tavriya Simferopol, yakasarudzika Sports School yeOlympic reserve (kirabhu yenhabvu academy).
Akanga asati ambodziya bhenji, asi nguva dzose ari muvambi muhupenyu hwake hwose hwebhola. Zvisinei, pazera remakore 15, akachinjira kutsiva. Kuchinja kwakashamisa kune vakawanda.
Kutamba nhabvu yaive yakawandisa mutengo kuvabereki vaOleksandr Usyk. Nekudaro, Bhokiseni yaive yakananga uye iine hushamwari. Nekuda kweizvozvo, akatora maviri ekutanga eangu magasi magasi mu2002.
Oleksandr Usyk Yemhuri Mhemberero:
MuUkraine Boxer aibva kumba kwevarombo. Chikonzero chake chikuru chekuchinjira kuBhokisi raive mutengo wakakwira unobatanidzwa mukuenda kunhabvu yehunyanzvi. Zvidimbu zvekudzidziswa, mhando dzemidziyo, uye zvivakwa zvebhora zvaidhura.
Aifanira kutora mabasa mashoma kutsigira vabereki vake vane mari shoma. Oleksandr Usyk akararama mumapurazi, akafudza mombe, akaunganidza nekutengesa michero (apricots nemapichisi) uye ice cream mumigwagwa mune mimwe kuti vawane chouviri.
Oleksandr Usyk Mhuri Kutanga:
Seizvo zita rinoratidzira, Oleksandr haasi Chirungu. Zita rake "Oleksandr" rinoratidza chero chiGiriki kana chiUkraine dzinza. Oleksandr kana Alexander mururimi rweChirungu zvinoreva kudzivirira varume. Oleksandr Usyk anobva kuSimferopol.
Kuve wakazvarwa muSimferopol, rinova iro rechipiri pakukura guta muCrimea Peninsula. Simferopol iriwo guta guru re (Autonomous) Republic yeCrimea. Kunyangwe iyo Republic yeCrimea yakagovana miganhu pakati peUkraine neRussia.
Vanhu veSimferopol maUkraine. Saka, nechikonzero ichi cheBiography Nyaya yedu, tinogona kufunga kuti Oleksandr Usyk muUkraine. Pazasi pane mufananidzo unoratidza midzi yeane tarenda Boxer.
Mepu inoratidza mhuri yaOleksandr Usyk.
Oleksandr Usyk Yekutanga Basa:
Mushure mekuchinjira ku Boxing pazera regumi neshanu, tarenda reUkraine rakadzidziswa zvine simba kugadzirira mitambo inotevera. Saka na 15, pa 2006, anga akunda mashoma mitambo.
Kumakwikwi eEuropean muna 2006, akabuda achikunda mumitambo yake mitatu yekutanga achipikisana nevaimupikisa.
Kumakundano eEuropean muna 2006, akabuda mukukunda.
Nekudaro, mu semi-fainari, akapfuurwa nenyeredzi yeRussia Matvey Korobov. Zvishoma nezvishoma, akabva akwira kuenda kuhuremu hwakazotevera uye akahwina mukombe weStrandja muna2008.
Moreso, akasimudza rimwe rinorema kirasi ndokuenda kumutambo weOlympic, kwaakazova mukundi mumitambo yake.
Oleksandr Usyk Dzidzo:
Kunyangwe zvichiratidzika sarudzo yake yekuve mutambi wetsiva akauya mushure, Olek haazviratidze mumhedzisiro yake. Sezvambotaurwa kare, aida kuva mutambi wenhabvu uye saka akapinda chikoro chebhora.
Oleksandr Usyk akapinda SC Tavriya Simferopol nyanzvi yemitambo chikoro cheOlympic reserve (kirabhu nhabvu academy).
Zvakangodaro, mushure mekuchinjira kuBhokiseni muna2002, akanyoresa uye akapedza kudzidza kuLviv State University yePanyama Tsika.
Collage yeLviv State University yePanyama Tsika.
Ndichiri kuLviv State University yeFizikiki Tsika, iye nyanzvi mune zvemitambo dzidzo.
Andriy Husin weFC Dynamo Kyiv aivewo mudzidzi ipapo, mumwe weakanyanya kutorwa kuUkraine Internationals enguva dzese. Nekudaro, akasuruvara akashaya mutsaona yemudhudhudhu mu2014.
Oleksandr Usyk Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Mushure mekuhwina goridhe mumakwikwi e2008 eEuropean, Olex akahwina mimwe mitambo yakawanda yaimukwanirisa kumaOlympics.
Kunyanya zvakadaro, seamateur, Usyk akatakura menduru dzegoridhe paMakwikwi e2011 uye 2012 Olimpiki, ese ari muchikamu cheheavyweight.
Akatakura menduru yegoridhe kumaOlimpiki a2012.
Usyk akachinja pro muna2013 aine 26. Iye akazo saina chibvumirano chekusimudzira nehama dzaKlitschko 'K2 Promotions, vachirwa muchikamu cheCruiserweight. Uye zvakare, Oleksandr Usyk akapinda muhondo yake yechitatu yehunyanzvi muna Kubvumbi 3.
Akaita kutanga kwake kuGerman kuKoenig Pilsener Arena, achikunda Ben Nsafoah kuburikidza ne3rd-round knockout. Zvakangodaro, Usyk akakunda mumusoro wake wekutanga muna Gumiguru 4, 2014, kuburikidza neyakagumi neshanu yekugogodza kweiyo Interim WBO Inter-Continental cruiserweight zita.
Akadzivirira zita racho mwedzi miviri gare gare uye aive pamberi pamakadhi matatu evatongi panguva yekumiswa.
Oleksandr Usyk Biography- Kumuka kune Mukurumbira:
Achikunda mwoyo yevateveri vake, Oleksandr Usyk akaramba achitora chikamu uye nekukunda mumizhinji yemitambo yake.
Muna 2016 akakunda Krzysztof Glowacki nemapoinzi mumutambo wainakidza wekutora mukombe weWBO. Akabva atora zita reWBC achirwisa Mairis Briedis.
Pasina nguva refu, akaita mumitambo yakakosha kwazvo munhoroondo yetsiva. Pakupedzisira kwe2018 - 2020 World Boxing Super Series yeCruiserweight, akabata mazita eWBA neIBF achirova Murat Gassiev nedanho rakafanana mushure mekutenderera gumi nemaviri.
Yekutanga Boxer kuWBA, WBC, IBF, uye WBO mazita panguva imwechete muchikwata che cruiserweight.
Usyk akave wekutanga weBoxer kubata iwo mabhande (WBA, WBC, IBF, uye mazita eWBO panguva imwe chete) muchikamu che cruiserweight. Akabatanidza mazita mana makuru epasirese.
Achienda kumusoro kune chinorema chikamu, Olex akange arwira kurwisa kwake aimbove mukwikwidzi wepasirose Derek Chisora ​​muna Gumiguru 2020.
Nekuda kweizvozvo, aizove wekutanga mumutsara kurwira zita reWBO rinorema rinobatwa naAnthony Joshua mumashure muna 2021. Kuvaka kusvika pakurwa uku kukuru, Usyk akaita meseji yakavanzika kuna Anthony Joshua.
Kurwira zita reWBO rinorema.
Iwe unofunga Oleksandr Usyk ari mune chero hukama?:
Iye zvino izita remumba mune yake yekuzvarwa kuUkraine kubvira paakabata cruiserweight chikamu, Oleksandr Usyk haana kuroora. Akave akaroora kuUkraine, Kateryna. Vaviri ava vakafambidzana uye vakazosunga pfumo muna 2009.
Muchato uri kufamba zvakanaka kubva pawakatangwa. Kunyangwe asiri munhu weruzhinji, mukadzi wechiUkraine waOlex anonzi akajeka, Akanaka, uye ane hunhu hwakatanhamara. Haana pasocial media aripo, asi anoita nepaanogona napo kuti asaodza moyo vateveri vake.
Oleksandr Usyk nerudo rwehupenyu hwake, kateryna.
Zvizhinji nezve Oleksandr Usyk Vana:
Iwo mashanu tsoka 5 inches Kateryna, pamwe chete naye hubby, Oleksandr Usyk ane vana vatatu. Vana vakazvarwa mu7, 3 uye 2009, zvichiteerana. Kunyangwe hazvo zvakawanda zvisingazivikanwe nezvavo, ivo vava kugara muKyiv, Ukraine.
Mufananidzo wemhuri weUsyk, mukadzi, uye vana.
Oleksandr Usyk Hupenyu Hwemhuri:
Sezvinowanzo danwa nevateveri vake vanoramba vachiwedzera, kati inoda mhuri yayo zvakanyanya uye inovatsigira pese pazvinodiwa. Ndirwo rwaive rwumwe rudo rwakamutungamidza pakutanga kuita mabasa madiki ekubatsira vabereki vake.
Vabereki vake vakaramba vachiratidza yavo isingaenzanisirwe rutsigiro kubva paudiki kunyangwe kusvika zvino. Zvino, ngatitorei kuputsika nekukurumidza kwenhengo dzemhuri yake.
Zvizhinji Nezve Oleksandr Usyk Vabereki:
Sezvambotaurwa, vabereki vaOleksandr Usyk vakanga vasina mari. Zvaiva pachena kuti vaive varimi uye vaifanira kuita mabasa akaderera kuti muviri urambe uri pamwe chete.
Vaive baba vake vakakurudzira switch kuna Olex, kwaakabvuma.
Vabereki vake vese vanobva kuUkraine uye vachiri kutsigira mwanakomana wavo, kunyanya mutsika, panguva yese yebasa. Vakanga vari amai vaOleksandr vakamutengera tikiti rekufambisa nekuda kwekutanga kwake tsiva.
Zvizhinji nezve Oleksandr Usyk Vanun'una:
Izvo zvakare zvinogoneka uye zvakanyanya mukana wekuti cruiserweight division Boxing Champion ine vanin'ina, ingave hafu kana izere neropa.
Uyezve, Vanin’ina vaOleksandr Usyk vanofanira kudada kushamwaridzana nehama yavo, kunyange isu tisati tavaziva.
Zvizhinji nezve Oleksandr Usyk Hama:
Mutambi weUkraine-Akazvarwa ndewemhuri inoenda kure kure kuchengetedza ruzivo rwemhuri yavo sehungwaru sezvinobvira.
Zvisinei, Oleksandr Usyk anofanira kuva nedzimwe hama kunze kwevabereki vake nevanin'ina. Dzimwe hama dzake dzinosanganisira vanababamunini, vanatete, nasekuru nasekuru.
Oleksandr Usyk Hupenyu hweMunhu:
Kufanana nevazhinji vemaodzanyemba emabhokisi, Alex anotungamira kurwa kwake neruoko rwerudyi. Uye zvakare, anomira nerutsoka rwemberi kumberi, achishandisa ruoko rweruboshwe rwekurova kwakasimba kwazvo. Kupesana, kunze kwebhokisi, anofarira zvimwe zvinhu zvakawanda.
Usyk anofarira kutamba uye anowanzo kutumira mavhidhiyo pamhepo achitenderera mujimu uye kunyangwe kunze. Anoita hopak, inova dhanzi rechinyakare rekuUkraine.
Kutamba kwose ikoko kwaigona kutsanangura chikonzero nei ari munhu anoshinha uye asina chiedza patsoka dzake!
Zvimwe zvezvinhu zvaUsyk zvaanofarira zvinosanganisira kushambira, kushanda kunze kunzvimbo yekurovedza muviri, kufamba nzendo refu nemhuri yake, uye kuenda kuimba yemitambo.
Iye zvakare ane hunyanzvi hwe psychology. Zvisingashamise, chidhori chake chetsiva ndiMuhammad Ali, chimiro chinokurudzira vazhinji kuti vatange pro tsiva.
Mutambi weUkraine ane huwandu hwakakura hwevatsigiri nevatsigiri pamapuratifomu ake enhau. Usyk ine inowedzera nhamba yevanosvika 1m vateveri pa Instagram uye 66.5k vateveri veTwitter.
Oleksandr Usyk Mararamiro:
Iyo isingazivikanwe cruiserweight shasha yaita mari zhinji iri kuita scuffles. Oleksandr Usyk akabuda ari pamusoro mumakwikwi mazhinji uye mibairo iyo yakasundira kukosha kwake panguva yese yebasa rake.
Anokwanisa kutenga dzimba dzepamusoro uye mota. Ane imba yakanaka muKyiv, Ukraine. Pazasi pe clip inoratidza imwe yemota dzake nyowani.
Oleksandr Usyk's Net Kukosha:
Usyk pasina mubvunzo ari kuwana mari yakakwana kubva kubasa rake sebhokisi. Ndiye mumwe wevakapfuma maBhokisi.
Mushure menguva refu yetsiva, Olex akabudirira kuita mambure anosvika madhora Mamirioni mana, sekureva kwenhau.
Chikwama chake pamubhadharo wekurwa chakatenderedza mamirioni 1.5 emadhora. Nekudaro, kurwira kwake muripo kunofanira kuwedzera kana akakunda Anthony Joshua muhondo yake inotevera.
Nguo dzetsiva uye kambani yemidziyo BoxRaw inotsigira muko weUkraine. Akasimudzirawo mhando kune ese enhau enhau.
Oleksandr Usyk Chokwadi chechokwadi:
Kunze kwezvo, iyo nyaya yehupenyu yakataurwa kusvika parizvino, hezvino zvimwe zvisingawanzoitika nezve Oleksandr Usyk nebasa rake rinonakidza retsiva.
Chokwadi # 1: Birthday Rakaitika:
Oleksandr Oleksandrovych Usyk akazvarwa pazuva rimwe chetero negamba rake, Muhammad Ali, muna Ndira 17, 1987. Zvichida mugumo une nzira yekusarudza uyo anozadza chinzvimbo chipi panguva yakati.
Mufananidzo wengano, Muhammad Ali.
Chokwadi # 2: Pamberi peBoxing:
Iye Multi-matarenda shasha, achitamba nhabvu, aive nhengo yeUkraine Premier League kubva pakuvambwa kwayo, uye akave akakwirisa kuUkraine Premier League yekutanga, ichivaita chimwe chezvikwata zvitatu chete zvakambotora zita iri.
Chokwadi # 3: Nyika inodada:
Kutorwa kweCrimea neRussian Federation kwakaitika muna Kubvumbi 2014.
Pakati pekutorwa uku, Oleksandr Oleksandrovych Usyk akataura kuti haaizofa akachinjana chizvarwa cheUkraine kuti ave mugari weRussia uye kuti aiona Crimea sechikamu cheUkraine.
Zvakangodaro, anotenda zvakanyanya kune vateveri vake veRussia uye haaedze kugadzira kupatsanura.
Nyika inodada inoratidza mureza weUkraine.
Chokwadi # 4: Simba rebasa maitiro:
Kuzvikudza kweUkraine kwagara kuri nehunhu hwakasimba hwehunhu kubva paudiki hwake. Akawana hupenyu hwake mumapurazi, akafudza mombe, akaunganidza nekutengesa michero uye ice cream achiri mudiki.
Tsika dzakafanana dzakamuona achibudirira muhupenyu hwake hwese hweBoxing, sekuonekwa muzvikamu zviri pazasi.
Chokwadi # 5: Nheyo uye Charity:
Kuti adzosere kunzanga, iyo yekuUkraine yakafumura hwaro hwayo hunonzi Oleksandr Usyk hwaro. Basa resangano nderekuchengeta vanoshaya nekubatsira vasina rombo rakanaka.
Chokwadi #6: Chitendero chaOleksandr Usyk:
Alex muKristu. Akauya kuOrthodox chiKristu semwana muchipatara. Usyk anoshuma kuti mushure mekunge mupristi ashanyira nemasipi, akaswedera padyo kuti abvunze kuti Mwari varipi.
Oleksandr akabvunza kuti angasvika sei kuna Mwari, kwaanogara, uye maonero aanoita nekunzwa. Kubva ipapo akaramba akatendeka muOrthodox.
Oleksandr Usyk pamwe neOthordox Priest.
Chokwadi # 6: A Movie Star:
Usyk zvakare nyeredzi pane sirivheri skrini! Akaratidzwa mushanduro yeUkraine ye'The Stolen Princess,' firimu rine animated kubva muna 2018.
Zvakatonyanya zvakadaro, akaridza izwi remumwe wemakororo maviri eTroyeschyna, padivi pemukwikwidzi ane simba Vasyl Virastyuk!
Olek akaonekwa mune yeUkraine vhezheni ye 'Akabiwa Mambokadzi.'
Kuti uwane pfupiso ye-ye-pekutarisa yehupenyu hwake nhoroondo, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveiye akakurumbira Ukrainian Boxer.
Zita rizere: Oleksandr Oleksandrovych Usyk
Zita rekudanwa: Iyo Katsi naOlek
Zuva rekuzvarwa: 17 Zuva raJanuary 1987
Nzvimbo yekuzvarirwa: Simferopol, Ukrainian SSR, Soviet Union
kukwirira: 6 ft 3 inches (1.91 m)
Residence: Kyiv, Ukireni
Tine tarisiro yedu kuti wakanakidzwa neOleksandr Usyk Biography uye Yehucheche Nyaya. Kunze kwebasa rake rakasimba rebasa, akaramba akatarisa uye asingazungunuke akananga kubhodhi basa rake.
Pamusoro pazvose, isu takaona kuti kana kugona kugona muhupenyu hakunei nemunhu, kunyangwe vabereki. Hupenyu hunogara huchipa matambudziko aro, asi zvaunoshandura chimwe nechimwe chazvo, kuvimba nemaonero emunhu.
Kunyangwe kubva pasi pevarombo uye aine hope dzekuve nyeredzi nhabvu, Olek anoramba kusiya ramangwana. Tinofungidzira kuti anoziva kuti pane pane kuda, pane nzira. Kunyange zvakadaro, Oleksandr Usyk ari kubatanidza kumashure nababa vaVasyl Lomachenko / murairidzi Anatoly Lomachenko wehondo yaAnthony Joshua.
Haasiye kana dombo risingashandurwe. Nekudaro, sevataridzi uye mafeni, zvese zvatingaite tariro yeakanakisa mhedzisiro. Kunyange iri mukana wekugadzira nhoroondo kuna Usyk, inguva yekuti Anthony Joshua asimbise pane ake akange akunda kukunda.
Wakawana here Oleksandr Usyk Biography kuti ibatsire? Zvichida une chimwe chinhu chingatibatsire maererano nemaitiro akanakisa, titumire mhinduro. Zvikasadaro, ndatenda nekuverenga, uye ramba wakabatana kune hwakawanda hwenyaya chokwadi neiyo yepamusoro-notch kunyatso.